Gudoomiye Sufurow Oo Gaaray Magaalada Buula-barde – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wafdi balaaran uu hogaaminayo Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan oo sugan Gobolkaasi ayaa waxa ay gaareen Magaalada buula-barde iyagoona la kulmay mas’uuliyiinta deegaanka iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada ku dhaqan Buula-barde.
Wafdiga uu hogaaminayay Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan Cabdullaahi Axmed Maalin Sufurow ee shalay gaaray Buula-barde ayaa waxaa kamid ah saraakiil Hay’adda Qaramada Madoobi u qaabilsan cuntada ee (WHO) iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan Gobolka Hiiraan.
Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan Cabdullaahi Axmed Maalin Sufurow ayaa sheegay in dadka ku nool degmada Buulo-burde ay yihiin dad adkeysi badan,isla markaana waxyaabihii nolosha bani’adamka muhiimka u ahaa ay waayeen taasina ay usii dheer tahay in ay go’dooomiyeen Dagaalyahanada Ururka Al Shabaab.
Wadda dheer ay xiriirisa Magaalooyinka Balad-weyn iyo Buula-barde ayaa waxa ay go’doonsan tahay in ka badan Afar Sano mana jiro wax isku socday gaadiid ah oo u kala goosha bartamaha iyo Gobolada Koonfureyd.
Ciidamada howlgalka Midowga Afrika ee AMSIOM iyo kuwa dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa tiro dhowr jeer ah oo hore isku dayay in halkaasi ay kala wareegaan gacan ku heynta Xarakada Al Shabaab .